Ciidamada Dowladda oo nin dhallinyaro ahaa ku dilay Magaalada ... | Universal Somali TV
Ciidamada Dowladda Somaliya ayaa fiidnimadii caawa rasaaseeyay mooto bajaaj iyo dadweyne kale oo ku sugnaa nawaaxiga Isgoyska Zoobe ee Magaalada Muqdisho.
Ciidamada Dowladda oo watay gaari nooca dagaalka ayaa la soo sheegaya in rasaas damceen inay ku furtaan waddadaasi, xilli uu mashquul ka jiray.
Wararka ayaa sheegaya in rasaastaasi ay haleeshay nin dhallinyaro ahaa, oo la socday mooto bajaajta.
Mahad Cabdiraxmaan Maxamuud oo rasaastaasi ay madaxa ka haleeshay ayaa markii hore lagula cararay Isbitaalka Madiina, markii waxba looga qaban waayayna loo qaaday Isbitaalka Digfeer. Mahad Cabdiraxmaan ayaana markii dambe u geeriyooday dhaawacaasi.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inaanan ciidan dowladeed la oran karin, kuwii xalay Magaalada Muqdisho ku dilay Sakariye Maxamuud Xuseen iyo Sowdo Maxamuud Xuseen oo walaalo ahaa, caawana rasaasta la dhacay Mahad Cabdiraxmaan.
"Ciidan dowladeed maahan ee waa cadow dadka loo soo diray. Ciidamada xalay Sakariye iyo Sowdo dilay, caawana Mahad Cabdiraxmaan xabadaha la dhacay, waa in la soo qabto, si degdeg ahna sharciga loo horkeeno, haddii kale dadka reer Muqdisho waxay ku khasbanaan doonaan in ay hubkooda qaataan, si ay isaga difaacaan cadowgan duulaanka ku ah." Ayuu yiri Mahad Maxamed Salaad oo warkan ku sheegay bartiisa Facebook.
Ciidamada Dowladda ee adeegsada wadooyinka Magaalada Muqdisho ayaa rasaas ku furta wadooyinka, marka uu mashquul ka jiro, iyadoona xilliyada qaarkood rasaastaasi ay waxyeelo ka soo gaarto dadweynaha gaadiidka iyo lugtaba ku maraya wadooyinka magaalada.
Kan-xigaRa&#039;iisal Wasaare Rooble oo ka ha...
Kan-horeBooliska oo ka hadlay dilka wiil iyo ...
63,298,345 unique visits